शरदले डिपिएल नखेल्ने सम्भावना ! | Hamro Khelkud
शरदले डिपिएल नखेल्ने सम्भावना !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– धनगढीमा चैतमा हुने धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेटको दोस्रो संस्करणमा शरद भेषावकर नखेल्ने सम्भावना बढेको छ । पहिलो संस्करणको उपविजेता टोली विराटनगर किङ्ग्सका कप्तान समेत रहेका शरदले व्यक्तिगत कारणले यसपटकको डिपिएल नखेल्ने स्म्भावना रहेको बताएका छन् ।
डिपिएल तोकिएको समय (मार्च) मा भयो भने म नेपाल नहुन सक्छु , बाबु बन्ने तयारीमा रहेका उनले भने ,म व्यक्तिगत कारणले अमेरिकामा हुन सक्छु । समय मिलेन भने यसपटक म नखेल्न सक्छु ।
डिपिएल २ सुरुमा जनवरी १९ मा हुने भनिएपनि राष्ट्रिय टोलीको व्यस्तताका कारण मार्च (३१) मा धकेलिएको हो । डिपिएलका लागि खेलाडीको अक्सन भने फेब्रुअरी ८ मा हुने बताइएइको छ । अघिल्लो सिजन पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको सिवाईसी अत्तरियाले फाइनलमा शरदको कप्तानीमा रहेको विराटनगरलाई हराएको थियो ।
शरद र चलचित्रकर्मी निशा अधिकारीको जोडी पहिलो सन्तानको पखाईमा छ । शरद र निशा असार १६ गते बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए । केहि साताअघि निशालेसामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आमा बन्न लागेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
‘आइपिएल भन्दा राष्ट्रिय टोलीमा केन्द्रित छु’– सन्दिप